Soo-booqdayaashaadu ma rabaan inay waxbadan bartaan ama akhriyaan inbadan | Martech Zone
Soo-booqdayaashaadu ma rabaan inay wax badan bartaan ama akhriyaan inbadan
Jimce, Maarso 1, 2013 Jimce, Maarso 1, 2013 Douglas Karr
Marar badan, suuqleydu waxay aad ugu mashquulsan yihiin helitaanka taraafiko badan oo aysan waqti ku luminayn hagaajinta boqolleyda beddelaadda ee taraafikada ay horay u gaareen. Toddobaadkan, waxaan dib u eegay a barnaamijka email-taabashada badan macmiilka Xaqa Is Dhexgalka. Macaamilku wuxuu dejiyay ololeyaal yaab leh laakiin waxay ku dhacday heerar hoose oo guji-yar iyo beddelaad.
Waxaan ogaanay in e-mayl kasta uu leeyahay xiriiriyeyaal isku mid ah iyaga oo loo adeegsado in macaamiisha dib loogu celiyo goobta:
Wax dheeri ah baro….
Kama soo horjeedo adeegsiga qoraallada isku xirnaanta sidan, laakiin markii aan lagu darin shaah, dheefaha, astaamaha iyo dareenka degdegga, ma helayaan qasabadaha aad u baahan tahay. Bal ka fikir haddii xiriiriyeyaashan loo beddelay:
Akhriso sida macaamiisheennu ay u gaarayaan seddex laab laab wax soo saar. Ku billow inaad aragto waxsoosaarka kororka ganacsigaaga hadda.
Baro sida barnaamijkeenu yahay si fudud u dhexgalaan codsiyadaada hadda.
2 daqiiqo gudahood, fiidiyowgaan cajiibka ah wuxuu kuu sharxi doonaa sababta aad ugu baahan tahay inaad maanta isqorto bedesho noloshaada.
Kuraasta ayaa gabaabsi ah, diiwaan demo maanta iyo ku hel ebookkeena bilaash!
Faa'iido iyo dareen deg-deg ah ayaa saameyn ba'an ku leh sicirkaaga gujinta. Ha ku lumin fursad aad ku hesho emayl ama maqaal aad ku kordhin karto gujintu illaa qiimaha. Dadku ma rabaan wax dheeri ah baro, Akhri wax dheeraad ah, daawato or diiwaan inay ogaadaan mooyee inay wax faa iido ah u leedahay inay sidaa sameeyaan mooyee!
Fiiro gaar ah: Ma aha in la xuso in gudaha isku xirka noocyada ereyada ay tahay fiicnaansho xun. Ku darista xiriiriye luqad sharraxaad dheeri ah ayaa kafiican waxyaabahaaga si fiican mashiinnada raadinta.
Tags: wax dheeri ah baroqoraalka isku xidhkaAkhri wax dheeraad ahfiirso hadda
Qulqulka Shaqada Suuqgeynta
Mar 2, 2013 at 12: 41 PM
Markii aan aqriyay qoraalkan, waxaa jira xayeysiin loo maro Suuqa loo yaqaan 'Marketpath' oo si fudud u leh "Waxbadan Ka Baro" 🙂
Mar 3, 2013 at 2: 46 PM
Aad u qosol badan, @robbyslaughter: disqus! Xaqiiqdii waxaa jira fursad lagu xoojinayo CTA-daas. Difaacooda, waxaan u maleynayaa inay jirto hal faa'iido oo halkaa taala - 'fudud'.